Veloma ny veterana amin'ny indostrialy mandeha Satya Prakash Dutt
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Veloma ny veterana amin'ny indostrialy mandeha Satya Prakash Dutt
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana India • Vaovao • People • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Tsiambaratelo momba ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny fahaverezan'ny Satya Prakash Dutt tamin'ny 27 aprily 2021, fantatry ny maro amin'ireo namany sy mpankafy azy hoe "Speedy", dia nanala ilay matihanina miloko avy amin'ny indostrian'ny fizahan-tany, izay nanana fahalianana maro karazana.
Ny tompon'andraikitra ambony teo aloha ho an'ny Air India dia nandalo noho ny COVID-19.
SP Dutt dia nandray anjara mavitrika tamin'ny fikarakarana seminera "Know India" amin'ny faritra maro manerantany mba hampiroboroboana ny fizahantany miaraka amin'ny Departemantan'ny fizahan-tany sy ireo mpizahatany mpizahatany sy mpizahatany hafa.
Hotsaroana indrindra izy satria ny hatsarany, ny vazivazy ary ny fahatsorany.
Amin'ny maha tompon'andraikitra ambony an'ny Air India azy, Satya Prakash Dutt dia nahalala ny zava-drehetra momba ny fiaramanidina ary koa momba ny teknolojia sy ny siansa, izay tombontsoany hafa. SP Dutt dia nahavita ny MS avy ao amin'ny Oniversite New York ao amin'ny Applied Science ary izy koa dia mpikambana ambony tao amin'ny American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA). Fantatra ny fitiavany fizahantany sy ny reharehany amin'ny Air India.
Taorian'ny nijanonany ela tamin'ny Air India dia nandefa ny Intermedia izy mba hanao lisitra ny vaovao momba ny dia lavitra na lavitra. Ho serivisy ho an'ny indostria ary taratry ny fitiavany manokana, nandefa ny mailaka ho an'ny matihanina momba ny dia, fizahan-tany ary fiaramanidina 80,000 eo ho eo izy.
Fa angamba any ankoatr'izay Air India, ny tena hahatsiarovana azy indrindra dia ny hatsarany, hatsikana ary fahatsorany. Vonona hatrany amin'ny tsiky mahafaty izy, nanana zavatra tsara holazaina momba ny rehetra izy, ary tena nirehareha tamin'ny zanany vavy roa, Barkha sy Bahar, izay nanamboatra toerana ho azy ireo tao amin'ny sehatry ny haino aman-jery sy ny tontolo iainana ary ny tontolo iainana.